ဘယ်သူအိမ်ရှင်လဲ(သို့)ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cover Faces » ဘယ်သူအိမ်ရှင်လဲ(သို့)ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှု
- mg nu
Posted by mg nu on Sep 25, 2013 in Cover Faces, Creative Writing, Myanmar Gazette | 26 comments
လူမျိုးရေးကိုသွေးထိူးနေသောအစွန်းရောက်စိတ်ဓါတ်ပင်ဖြစ်ပါသည် ။ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လျှင်အိမ်ရှင် အခြားဘာသာကိုးကွယ်လျှင်ဧည့်သည်ဆိုသောအစွန်းရောက်
ပါသည်။ထိုသည်မှ သမိုင်းကိုနားမလည်သော အစွန်းရောက်အယူအဆတစ်ရပ်ဖြစ်
ကိုးကွယ်ကြသည့်ဘာသာမှာ နတ်ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာဖြစ်ပြီး ထိုနောက်ဟိန္ဒူဘာ သာ၊ အရည်ကြီးဂိုဏ်များ၊မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ၊ဟိနယာန(ဇတ်နိမ့်)ထေရ၀ါဒ၊အစ္စ
လာမ်ဘာသာ၊ခရစ်ယန်ဘာသာ ၊ဂျိမ်း ဘာသာအစရှိသဖြင့် ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပြီး နောက်ကျမှဝင်ရောက်ပျံနှံလာသောဘာသာအချင်းချင်း သူဘာသာကိုး
ကွယ်မှ အိမ်ရှင်ဆိုကာမောင်ပိုင်စီးပြီးပြောဆိုနေကြခြင်းမှာ စာပေမတတ်မြောက်
သော သူများကဲ့သို့ လူရယ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေကြပါသည်။တကယ်တန်းလက်တွေ့
သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်မည်ဆိုပါကလည်း “ပုဂံမှာကြည့်ရင် ဘာသာ ၃ မျိုးရှိတယ်။ ထေရဝါ မရောက်မှီ မှုရင်း နတ်ကိုးကွယ်တာ၊ မပာာယာန နောက် အစ္စလာမ် ရှိမယ်။ ထေရဝါဒက နောက်မှ ရောက်တာပါ။ ထေရဝါဒ ရောက်ဖို့ မွတ်စ်လင်မ်တွေက အသက်ပေးရတာပါ။ သမိုင်းကို သေချာလေ့လာပါ” လို့ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း (မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်) က ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ပုဂံပြည်ကို ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ရောက်ရှိဖို့ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ ကိုသထုံ ဘုရင် မနှုပာာမင်းထံက အနော်ရထာမင်းက စစ်ခင်း ရယူခဲ့ရာမှာ စစ်အောင်နိုင်ဖို့ မြို့တံခါးပွင့်အောင် အသက်ပေး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ တဲ့ မွတ်စ်လင်မ် သူရဲကောင်း ဗျတ္တရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်ကို ရည်ညွန်းပြီး ဒေါက်တာ မြင့်သိန်းက အထက်ပါ အတိုင်း ပြောကြားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုဂံခေတ်မှာ မွတ်စ်လင်မ်မရှိဘူး ဆိုတဲ့ ပြောကြားချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကမ္ဘာသိ မြန်မာ့ သမိုင်းပညာရှင် ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ၁၉၇၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ထုတ် The Working People Daily သတင်းစာ ၊ စာမျက်နှာ ၃ က Mandalay Historical Research3ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတွေမှာ ပသီ ဆိုတဲ့ စာလုံးတွေ့ရှိကြောင်း ရေးသားထားတယ် ၊“ပုဂံခေတ် ကျောက်စာတွေကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ပသီဆိုတဲ့ ဝေါပာာရကို အစောဆုံး အေဒီ ၁၂၂၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ပုဂံမှာ အဲဒီ့ခေတ် ကတည်းက အရဗ်တွေ၊ တူရကီတွေ ဆက်သွယ်နေပြီဆိုတာ မှတ်ယူလို့ ရပါတယ်လို့ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကိုယ်တိုင် ရေးသားသွားခဲ့ပါတယ်” သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှ ရှင်အရပာံ ပင့်ဆောင်လာတဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ ပာာ မွန်ဘုရင် မနှုပာာ မင်းထံမှာရှိကြောင်း သိရှိသွားတဲ့ အနော်ရထာမင်းက ထေရဝါဒ ကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံ ရဖို့အတွက် မွန်ဘုရင်နဲ့ စစ်ခင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာမှာ မွန်ဘုရင်ရဲ့ မြို့တံခါးပွင့်ဖို့ အတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဗျတ္တက မြို့တွင်း ဝင်ရောက်ပြီး ဖွင့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အထက်ပါ တိုက်ပွဲမှာ ဗျတ္တကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
က မိမိတို့ စားဝတ်နေရေးချောင်လည်အောင်၊အနေအစားချောင်အောင် ဘာသာရေး
နှင့် လူမျိုရေးကိုရောယှက်ကာ ပြောဆိုနေခြင်းသည် ဘာသာတရားကိုပေါ်ထွန်းစေ
သေသာ သူတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုဆန့်ကျင့်ပြီး ပြောဆိုနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာတရားများသည် လူသားများကို ယဉ်ကျေးအောင်၊လူပီသအောင်၊ကိုယ်ကျင့်တ
ရားကောင်မွန်အောင်ပြုပြင်ဆုံးမပေးသော မွန်မြတ်သောတရားများဖြစ်ရာ ထိုသည်တို့
ကို ဆန့်ကျင်ပြီး ဘယ်ဘာသာကိုးကွယ်မှ အိမ်ရှင် ဆိုကာအစွန်းရောက်နေခြင်းသည်
တရားကိုအခြေခံသောဘာသာဖြစ်သလို့၊အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်ခရစ်ယန်ဘာသာတို့ သည်လည်းကမ္ဘာလူသားမျာအတွက်ပေါ်ထွန်းခဲ့သောဘာသာများဖြစ်ပါသည်။လူသား များ သည်မိမိကြိုက်နှစ်သက်သောဘာသာကိုကိုးကွယ်နိုင်ပါသည်။မည်သည့်ဘာသာကို
မောင်ပိုင်စီးရန်မဟုတ်ပါ။ မွန်မြတ်သော အနစ်သာရကို လူတိုင်းသိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမအရလည်း လူသားများသည် ဧည်သည်များဖြစ်သလို့
မည်သည့်လူမျိုးတွင်လူဖြစ်မည်ဟု့သတ်မှတ်ထားချက်လည်းမရှိပါ။လူမျိုးတိုင်းနေရာ တိုင်းတွင်သံသရာလည်ပတ်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောအယူအဆဖြစ်ပါသည်။တွင်အစ္စ လာမ်ဘာသာခရစ်ယန်ဘာသာတို့တွင်လည်းလူသားများသည်ဤလောကသို့ခေတ္တ လာရောက်နေထိုင်ကြသောဧည့်သည်များသာဖြစ်ပြီးကောင်းမှူကုသိုလ်ပွါးများစေရန် သာညွန်ကြားလမ်းညွန်ထားသည်ကိုတွေရပေမည်။
လည်စေရန်ပြောကြာရမည်ဆိုပါက ဗုဒ္ဓသည်မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ပါ။ အိန္နိယနိုင်
ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀တ်စုံများသည်လည်း ထိုနိုင်ငံသားတို့
၀တ်ဆင်သောပုံစံများသာဖြစ်ပြီးမြန်မာမှု့ပြုပြီး တိုက်ပုံဝတ်ကာ ရဟန်းပြု၍မရဆိုသည်
ထို့ကဲ့သို့ဧည်သည်အချင်းချင်း သွေးကွဲစေသော လှံ့ဆော်မှုများကိုပြုလူပ်
က အေးချမ်းသာယာသော၊လူသားပီသသော တရားများကိုသာဟောကြားသင့်ပေသည်
သို့ မဟုတိဘဲ လူမျိုးရေနိုင်ငံရေးရောထွေးကာ တရားထဲတွင်မပါသောအစွန်းရောက်
တရားမျာကို လူအထင်ကြီးအောင်ဟောပြောလှုံဆော်နေပါက ထိုဘာသာတရားသည်
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိုအကြမ်းဖက် ဘုန်းကြီးတရားပွဲများကြောင့် အကြမ်းဖက်မှု
များပွါးများလာပြီး ပြည်ထောင်စု့ကြီးပြို့ကွဲလာမည်ကို အတူးသတိထားသင့်ပေသည်။
စုံ ညီညွတ်စွာတိုက်ပွဲဝင်ပြီးမှရရှိလာသော နိုင်ငံတော်ဖြစ်ကာယခုလို့လွတ်လပ်ရေးရ
ပြီးမှ ဘာသာတစ်ခုမှ လူမျိုးတစ်ခုမှ မောင်ပိုင်စီးဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာတို့
အမှန်ကို သေချာစွာခွဲခြားလေ့လာ ရပါမည်၊ယခုမှမြင်တွေရသောတရားပွဲနှင့်ဗီဒီယို
ခွေများတွင် ပေါက်ကရဟောပြောနေသည်ကို မှန်သည်မှားသည်မသိဘဲ ၀ိုင်းဝန်း
ထောာက်ခံနေကြခြင်းသည် ယခင်ကရှိသောအရည်ကြီးများပြောသမျှယုံကာ မိမိ
တို့၏ဖနီးများကို ဦးဦးဖြားဖြားပန်းဦးဆက်ရသော ဘ၀သို့ပြန်ရောက်သွားမည်ကို
အချို့အစွန်းရောက်ရခိုင်လူမျိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာပျောက်ကအမျိုးပျောက်မည်ဆိုကာအစွန်းရောက်နေကြသောကိစ္စရပ်များမှာလည်းသမိုင်းကိုသေချာစွာလေ့လာသင်ပေသည်။ ရခိုင်ပြည်ရှိမင်းဆက်များသည်ပင် အိန္နိယမှလာသောမင်းဆက်များဖြစ်ပြီး ဟိန္နူဘာသာ
(ဘင်္ဂလား)ပြည်သို့သာပြေးဝင်ခိုလှုံခဲ့ရပြီးထိုမင်းဆက်များကိုပြန်လည်မင်းတင်ပေးခဲ့သူများမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များဖြစ်သောသမိုင်းကိုမမေ့သင်ပေ၊ရခိုင်မင်းဆက်တို့ မပျောက်ပျက်အောင် ထီးနန်တင်ပေးခဲံသော ကျေးဇူးတရားကိုမမေ့သင့်ပေ၊ရခိုင်
မင်းဆက်တို့သည်လည်းထိုကျေးဇူးတရားကို သတိရသောအားဖြင့် ရခိုင်မင်းဆက်
(၁၂)ဆက်တိတိ အစ္စလာမ်ဘွဲ့ခံကာကျေးဇူးတော်ကို အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့သော
ယခုမှ အမုန်းတရားပွါးကာ သမိုင်းကိုမသိဘဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်နှင့် အိန္နိယ
သားကုလားထင်ကာ ညှင်းပန်းနှီပ်စက် မောင်းထုတ်နေခြင်းသည် သမိုင်းစာမျက်နှာ
About mg nu
mg nu has written3post in this Website..
View all posts by mg nu →
ဟာဂျီ ကိုမောင်နု ရေ
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လူသားချင်းချင်းမညှာမတာ
တကိုယ်ကောင်းဆန် အလုပ်ဆုံးဘာသာကိုပြောပါဆိုယင် ခင်ဗျားတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဘဲမဟုတ်လား
အများကြီးတော်ပါသေးတယ်..ဒီလိုပြောလို့အစွန်းရောက်တွေကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး…နှိုင်းယှင်ပြတာပါ အစွန်းရောက်တယ်ဆိုတာဘယ်ဘာသာမဆို အားမပေးပါဘူး..
မောင်ပိုင်စီးရန်မဟုတ်ပါ။ ) ဆိုတော့ အာဖကန်နစ္စတန်အပါအ၀င် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွေ
ဒါကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ခုခေတ်မှာဥနှောက်မရှိ ရူးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာခြားတွေအိမ်ထောင်ပြုကြပြီဆိုပါတော့ အိမ်တအိမ်မှာဘာသာနှစ်ခု
အတူယှင်ကိုးကွယ်ခွင့် ခင်ဗျားတို့ဘာသာမှာခွင့်ပြုထားလား ?…
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရစ်ယာန်.. ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဟိန္ဒူ ဘာသာ ..ဒီဘာသာတွေဟာ
ခု ခေတ်စားနေတဲ့ အမျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာကို ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်သဘောမတူတဲ့အထဲမှာပါ ပါတယ်
အမျိုးစောင့်ဥပဒေထွက်လာတာကလဲ အဓိက ကခင်ဗျားတို့ရဲ့အတူယှင်တွဲကိုးကွယ်လို့မရတဲ့
ခင်ဗျားတို့တကယ်ပြုပြင်ရမှာက အိမ်တအိမ်မှာကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာ အတူယှင်တွဲကိုးကွယ်လို့ရအောင်ပြုပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားစေချင်တယ်..
ဒီလိုမှ မနေနိုင်ယင် မနေနိုင်တဲ့သူ ဒီနိုင်ငံမှာမနေတာအကောင်းဆုံးဘဲဗျို့…………….
အမယ် ကျုပ်ထက် အရင် ဦးသွားကြပြီ။ ဒါက ဒီလိုပါ မောင်နုရယ်။ မောင်နုဆိုတဲ့ နာမည်ကတော့ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တုန်းက ဘိုးတော်ဘုရားက မိမိနဲ့ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အယူဝါဒတွေကို(ဗုဒ္ဓဘာသာမှတပါး) သူသိအောင် တင်သွင်းဖို့ အမိန့်ထုတ်တော့ အရင်ဆုံး တင်သွင်းတဲ့ အစ္စလာမ် ပညာရှင်တဦးရဲ့ နာမည်ပါ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။ ကျုပ်တို့က သက်ဦးဆံပိုင် ခေတ်မှာတောင် အဲဒီလို သဘောထားကြီး ပါတယ် မောင်နုရယ်။ မောင်နုတို့ကျတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲ ဘာသာခြားဝင်ရင် အသေ ဝိုင်းသတ်တာပဲ မဟုတ်လား။
နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အခြား ဟိန္ဒူတို့ ခရစ်ယာန်တို့က အယူအဆ မတူပေမယ့် ပြဿနာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တတ်ခဲပါတယ်။ မောင်နုတို့ မွတ်ဆလင် ဘာသာနဲ့သာ ဒီလိုမျိုး ပြဿနာ တတ်တာပါ။
နောက်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဟိနယာန ဆိုပြီး ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဇာတ်နိမ့်ဆိုပြီး စော်ကားတာမျိုး ရေးပါတယ်။ မောင်နု စာမနှံ့စပ်ဘူးဆိုတာ အဲဒါနဲ့တင် သိသာပါတယ်။ ထေရဝါဒသတ်သတ် ဟိနယာနက သတ်သတ်ပါကွယ်။ မတူပါဘူး။ နောက်မှ သေချာရေးပေးပါမယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျုပ်အနေနဲ့ မောင်နုရဲ့ ကလောင်လေးကို တွေ့တာနဲ့ သားတပည့်လေးလို ဂရုဏာသက်မိလို့ပါ။
ဒီမှာ သဂျိုင်ခီး ခမျာ ဒီမှာ စော်ကားရေးသား ထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေပါ ခင်ဗျာ။ သူအရင် စတာပါ ခင်ဗျာ။
မြန်မာတွေ အစကတည်းက နေနေခဲ့တာမို့လို့ မြန်မာတွေက အိမ်ရှင်ပေါ့။ ဒီတော့ အိမ်ရှင် ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကလည်း အိမ်ရှင်ဘာသာပဲပေါ့။
ထေရဝါဒရောက်ဖို့ မွတ်ဆလိမ်တွေက အသက်ပေးရတာ ဆိုတာ မဟုတ်ပါဘူး မောင်နုရယ်။ ဒေါက်တာမြင့်သိန်း သမိုင်းကို လှည့်နေတာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဗျတ္တက ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စေတနာ ရှိလွန်းလို့ လာပြီး အသက်စွန့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကို မနူဟာဘုရင် ဖမ်းသတ်မယ်လုပ်လို့ ပုဂံကို ထွက်ပြေးလာတာပါ။ ပြီးတော့ သူဟာ အဲဒီတိုက်ပွဲမှာ အသက်ပေးပြီး ကျဆုံးတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက ဆရာချစ်ဦးညို ဝတ္ထုဆန်ဆန် ဖတ်လို့ကောင်းအောင် ရေးထားတာပါ။ ရာဇဝင်ကြီးတွေ အားလုံးထဲမှာ အမှုထမ်း ပေါ့လျော့တယ် ဆိုပြီး အနော်ရထာက ကွပ်မျက်တယ်လို့ပဲ ရေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး သူတို့ ညီအကိုဟာ အစ္စလာမ်တွေလို့ ဘယ်သမိုင်း စာအုပ်ထဲမှာမှ ရေးမထားပါဘူး။ ဝက်သားမစားတာနဲ့ အစ္စလာမ်ဆိုရင် ကျနော့်အဖေလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဝက်သားလုံးဝ မစားဘူး ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ထားပါ သူတို့ဟာ မောင်နု ပြောသလို မွတ်ဆလင်တွေပဲ ထားလိုက်ပါ။
အဲဒီလိုသာဆိုရင် မောင်နုတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို အရင် ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့ ညီအကို သဘောင်္ပျက်ပြီး မျောလာတုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်ကြီးက အရင်ကယ်ပြီး စောင့်ရှောက် ထားခဲ့တာလေ။ အဲဒီတုန်းက သူတို့က ငယ်ငယ်လေးရယ်။ အဲဒါ ဆရာတော်ကြီးက သူ့ကျောင်းက ဆွမ်းတွေ ကျွေးပြီး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ စောင့်ရှောက်ထားခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ ဒါတောင် ဆရာတော်ကြီး အပြင်သွားတုန်း မစားပါနဲ့လို့ သေသေချာချာ မှာထားတဲ့ ကျက်သရေခန်းထဲက ဇော်ဂျီဖိုဝင်သားကို ခိုးကျိတ်လိုက်သေးတယ် မဟုတ်လား။
မောင်နုဟာ စေတနာကောင်းနဲ့ ရေးသားတယ်သာ ဆိုတယ်။ ရခိုင်နဲ့ ဗမာကို ရန်တိုက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ရခိုင်မင်းတွေက ဘင်္ဂလား ၁၂ခရိုင်ကို အစကတည်းက ပိုင်ခဲ့တာပါ။ ပြောရရင် ရခိုင်တွေက အုပ်ချုပ်သူတွေ မောင်နုတို့ ဘင်ဂါလီတွေက အုပ်ချုပ်ခံတွေပေါ့။ စကားရိုင်းရိုင်းဆိုရင် သခင်တွေနဲ့ ကျွန်တွေပေါ့ကွယ်။ အဲဒီတော့ သူတို့ပိုင်တဲ့ ဒေသထဲ သူတို့သွားတာ ဘယ်သူ့ကို ကျေးဇူးတော် တင်ရဦးမှာလည်း။ ရခိုင်မင်းတွေ အစ္စလာမ်ဘွဲ့ခံတာကတော့ မောင်နုတို့က ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရခိုင်မင်းတွေက အဲဒီဘွဲ့တွေခံပြီး မောင်နုတို့ကို မခွဲခြားကြောင်း ပြပေးခဲ့လို့ပါ။
မောင်ရင်ကလေးSan Hla Gyiသမိုင်းကိုသင်ယူဖှိှုလို့ပါသေးသည် ၊ထေရ၀ါဒဆိုတာဇတ်နိမ့် ကဆင်းသက်
ရခိုင်မင်းတွေက ဘင်္ဂလား ၁၂ခရိုင်ကို အစကတည်းက ပိုင်ခဲ့တာပါ။ ပြောရရင် ရခိုင်တွေက အုပ်ချုပ်သူတွေ မဟုတ်ဘူးကွ၊ကုလားတွေကအုပ်ချုပ်သူတွေ၊ဘင်္ဂလီတွေကရခိုင်ရဲအရှင်သခင်တွေကွ
အုပ်ချုပ်ခံတွေပေါ့။ စကားရိုင်းရိုင်းဆိုရင် သခင်တွေနဲ့ ကျွန်တွေပေါ့ကွယ်။ ကျေးဇူးမကန်းကြပါနဲ့ ရခိုင်မင်းတွေ အစ္စလာမ်ဘွဲ့ခံတာကတော့ မောင်နုတို့က ရခိုင်တွေကို ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ရခိုင်မင်းတွေက အဲဒီဘွဲ့တွေခံပြီး မောင်နုတို့ကို မခွဲခြားကြောင်း ပြပေးခဲ့လို့ပါ။ တဲ့..ဟုတိပါမလားကွာ၊ နှစ်စဥင်္နှစ်တိုင်း ဘင်္ဂလားက အရှင်တွေကိုရခိုင်ဘုရင်တွေ ဦးခိုက်လက်ဆေင်ဘဏ္ဍာဆက်သရတာအထင်အရှားပါဘဲ၊သေသေချာချာလေ့လာပါကွာ၊
Mahar Myanmar ဆိုတဲ့ ( Deleted By Mod ) ကလေးရေ မင်းတို့တမ်းတနေလို့ငါဝင်ရှင်းရတာပေါ့၊ငါမရေးဖြစ်တာကြာပြီကွ
အလ္လာ ကို မယုံ မနေ ရ..မယုံရင် အသက်အန္တရာယ် ရှိ တာ..
မယုံသူ ကို …သတ်ဖြတ် ကြဖို့ ငယ်ငယ် ကတည်း က ဘရိန်းဝပ်ခ်ျ လုပ်ထားတယ်..
အကြောက်တရား တွေ ..နဲ့ ထိန်းချုပ်ထား တဲ့ ဘာသာ…ပါ
တဲံလား အခုတောအဲဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓမယုံသူကို သတ်ပစ်နေတာ၊
( Deleted By Mod ) ရဲဘရိန်းဝပ်ခ်ျလုပ်ခံနေရသူတွေဘဲ၊ အစ္စလာမ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးဘာသာတဲ့ကွ
တော့ ( Deleted By Mod ) ဖစ်ကုန်လိမ့်မယ်၊ ဗလီပေါ်ကဂျီဟတ်မအော်သေးလို့သာထွက်ပြေးနေတာပေါ့ကွာ၊အော်ရင်
အကြမ်ကဖက်တာမဟုတ်ဘူးကွ၊ဒီအစ္စလာမ်ကသည်းခံတတ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာမှမင်းတို့နှိပ်စက်နေတာကို ပြန်မလုပ်တာကိုကြည့်ရင်သိသာပါတယ်၊
ဟေ့ကောင် saline timmg
နာမည်ဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ မတည့်လို့ ခေါ်ချင်ရာ ခေါ်ကြတာကွ။ အဲဒါကို ငါက အများကြီး လျှောက်ရေးရင် မင်းနားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ မြန်မာတွေက မွတ်စ်ကုလားတွေကို ကုလား ကုလား ဝက်ချေးစားလို့ ခေါ်တာနဲ့ မင်းတို့ မွတ်စ်တွေက တကယ် ဝက်ချေးစားတဲ့ ကောင်တွေ ဖြစ်ရောလား။ မင်းကို မင်းရော ဝက်ချေးစားတဲ့လူ ဖြစ်ရောလား။ အဲဒီလို နားလည်စမ်းပါကွာ။
အခု မင်းဟာ အင်မတန်ကြီးတဲ့ အပြစ်ကို ကျူးလွန်မိပြီ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မင်းရဲ့ ဘိုးဘေးကို စော်ကားတဲ့ ပြစ်မှုကွ။ အခု မြန်မြန်လက်ဆေးပြီး ကိုရန်ကျမ်းကို ဗလီထဲသွားပြီး နာမာ့စ်ဖတ်စမ်းပါ။ ဒီလို မလုပ်ရင် မင်းကို မင်းကိုးကွယ်တဲ့ အလာက ခွင့်လွှတ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ငါ့အဘေးကြီးဟာ မင်းတို့ ကိုးကွယ်တဲ့ မော်လဝီဆရာကြီးကွ။ ဝန်ကြီး ဦးရာဇတ်တောင် ကိုးကွယ်ခဲ့သေးတယ်။ အခုလည်း မင်းတို့ ကုလားတွေ သူရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်နေကြတာလား မသိဘူး။ ဒါကြောင့် ငါ မောင်နုဆိုတဲ့ကောင်ကို သားတပည့်လေးလို ဂရုဏာသက်တယ်လို့ ပြောတာပေါ့ကွ။
အိမ်ရှင် ဆိုတာ…မရှိ ။
ဘာဆိုဘာမှ မရှိ ။
မသေခင်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ကြဖို့.. ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့… လူ့သမိုင်း.. မရိုင်းအောင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်..ထင်မိတယ်..။
ထေရ၀ါဒတွေသေရင်.. သံသရာခရီးဆက်သွား..။ ဧည်သည်ဆက်လုပ်..။
ကျုပ်ကတော့.. အိမ်ရှင်လည်းမဟုတ်..။ ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်..။
အစွန်း ဘသူရောက်လဲဒေါ့ အသိဗူး မာမူနုရေ.. တွေ့ဗူးသမျှ မူဆလင် ကပြားလေးတွေမှာ ၉၉%သည် အမေ မြန်မာ – အဖေ မွတ်စ်ပဲ…။ မိန်းမလုပ်သူဂ အိမ်ထောင်ကျတာ့ လိုလိုလားလား ယောက်ျားလုပ်သူ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ ပြောင်းတာတော့ အဲလောက် အချိုးအစား မဖြစ်နိုင်ထင်တယ်။ အဲဒါမျိုး အစ္စလာမ် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်း ခံနေရတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှု နိမ့်ပါးတဲ့ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ ဖြစ်တယ်။ တချိန်ထဲမှာ အစ္စလာမ်အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ အတင်းအဓမ္မ ကိုယ့်ဘာသာကို ကာကွယ်ထားတယ်။ ပြသနာ ဇစ်မြစ်ထဲမှာ ဒီတချက် ကြီးကြီးမားမား ပါနေဒယ်..။
ကျနော်တွေ့ဘူးခဲ့တာတော့ မွတ်ဆလာမ်မိန်းခလေးနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာယောကျာ်းလေး အိမ်ထောင်ပြု
ကြရာမှာ ယောကျာ်လေး ကဟိုဟာ ဟာလာလုပ် ရှင်ပြုခံလိုက်ရတယ် သူတို့ကမွေးတဲ့ခလေးတွေ
အားလုံးမွတ်ဖြစ်သွားကြတယ် နောက် မွတ် ယောကျာ်းလေးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းခလေးအိမ်ထောင်ပြုကြတော့လဲမိန်းခလေးကမွတ်ဖြစ်သွားတယ်
ဖိုကြီးဝါဒထွန်းကားတဲ့ မြန်မာပြည်လို နိုင်ငံတွေမှာ ယောက်ျားလုပ်သူ မိန်းမနောက်ပါပြီး ဘာသာပြောင်းတာ ပြောစရာ မရှိပါ ကိုရင်မောင်ရေ… ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားရပါမယ်… သို့ပေမဲ့ မိန်းမယူပြီး အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါး အသိပညာဗဟုသုတ ချို့တဲ့သူတွေ ဝေးလံခေါင်ဖျား တိုင်းရင်းသူတွေယူ အတင်းဘာသာ ပြောင်းခိုင်း။ ခလေးတွေကို ကိုယ့်ဘာသာထဲ အတင်းသွပ်သွင်း.. ငယ်စဉ်ကထဲက မိဘမဲ့စာသင်ကျောင်းဆီပို့ ဥနှောက်ဆေးပစ်တာ မြင်ပါများတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်လူမျိုးဖြစ်လျက် လက်ပိုက်ကြည့်နေရတာ ရင်နာလွန်းလို့ပါ…။ ကိုယ့်လူမျိုး အပြစ်တဝက်၊ ဒင်းတို့ အဓမ္မကျူးလွန်မှု အပြစ်တဝက်ပေါ့ဗျာ…
နည်းနည်း နည်းနည်း နဲ့ ကုလားအုပ် နေရာ ၀င်ယူ တဲ့ ပုံပြင်
အတိုင်း ကျင့်သုံးနေတာ ပါ..
ဥပဒေ မထိရောက် တဲ့ အစွန် ရွာတွေ မှာ ဗလီတွေ စာသင်ကျောင်း
တွေ .ကို .တဲကုပ် ကနေ ..တစ်ဖြည်းဖြည်း တည်ဆောက်ယူ သွား တာ..
နှစ် တွေ အများ ကြီး သုံးထား တော့ မသိသာဘူး..
ဒါပေမယ့် ဗလီ ကြီး ကတော့ ဟီး နေပြီ…
ဘာ တွေ သင်လဲ….
သူ တို့ အမူ အကျင့်တွေ ပြင် နိုင်ရင် မြန်မာ မှာ အေးချမ်း ပြီး သား ဆို တာ
မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲ ပါ
ထေရ၀ါဒတွေသေရင်.. သံသရာခရီးဆက်သွား..။ ဧည်သည်ဆက်လုပ်..။.
ကိုကြီးကိုင် ရေ..ဒီနေရာ မှာ နောက် တစ်ကြိမ် ဧည့်သည် လုပ်ရလို့ မြန်မာပြည် လူ ပြန် ဖြစ်
လာရင်… အဲဒီ အချိန် ဆို မွတ်ဆလင် နိုင်ငံ ဖြစ် နေမလား ပဲ..အဲဒါ ဆို..နောက် နောက် အကြိမ် တွေ သေခဲ့ ရင်
အလ္လာ ဆီ သွား ရတော့ မှာ ပေါ့… အခု ကို ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံ နဲ့ ပေါ်ပြူလေးရှင်း က ရာနှုံး နည်းနည်း ပဲ ကျန်ပါ တော့ တယ်… လူ့ဘ၀ ပြန် ရောက် ရင် တော့ Cause and Effect သီအိုရီ နဲ့ ဝေးကွာ တဲ့ ဘ၀ ရောက် ခဲ့ ရင် လုပ်နည်း တွေမှား တော့ မယ်… ဒါ ဆို ..အကျိုး ဆက် တွေ မကောင်း နိုင် တဲ့ အတွက် …
သံသရာ နဲ့ ချီ ပြီး နစ်နာ ကြ ရတော့ မယ် လေ…
ကိုမောင်နု ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင် လိုရင် ..ခင်ဗျား တို့ ဘာသာ ရဲ့ ၀ါဒ ရဲ့ အဆုံးအမ လေး တွေ ကို အရင် ပြင် လိုက် ပါဦး လား… ဥပမာ ဘယ်ဘာ သာ မှ …သူ တို့ ဘာသာ မယုံ ရင် သတ်ဖြတ် ပါလို့ မသွန်သင်ဘူး…မွတ်ဆလင် တစ်ခု ပဲ …မယုံကြည် တဲ့ သူတွေ ကို သတ် ဖြတ် ကြ ရမယ် တဲ့….
အင်အား နည်း ရင် ..ဟန် ဆောင် ပေါင်းသင်း ရမယ် တဲ့…( ကိုရမ်ကျမ်း ဆော့ကော်ပီ ရှိတယ် နော် ) ကလိမ်ကျစ် ဥာဏ် ဆိုတာ ဘယ်လို လူစား တွေ က ထွက်တယ် ဆို လူတိုင်း သိတယ် နော်…
ကျုပ် က မြန်မာ ပြည် တစ်ခု တည်း အတွက် ပြော နေတာ မဟုတ်ဘူး .
ကမ္ဘာ နဲ့ အ၀ှမ်း ပြဿနာ အရှာဆုံး ဘာသာ က မွတ်ဆလင် နော်..
အစ္စလမ် ရှိတဲ့ နေရာ မငြိမ်းချမ်း ဘူး…. အကြောက်တရား တွေ ကို ပဲ ..ခံစား နေရ လိမ့် မယ်..
အထူးသဖြင့် ခင်ဗျား ကိုယ်တိုင် ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဦး…အစ္စလမ် မှာ …မိသားစု ၀င်တွေ ဘာ သာ ကို စွန့်ခွါ ရင် ဘာလို့ အသတ် ခံ ကြတာ လဲ.. ဘာသာ ကို စွန့်ခွါ ရင် အသတ် ခံ ရမယ် ဆိုတာ အရိုး စွဲ နေတဲ့ ခင်ဗျား တို့ရဲ့ ဘာသာဝင် စိတ် တွေ ဘာ တွေ နဲ့ ဖုံးလွှမ်း နေ မလဲ.တွေး ကြည့် ပါ .လူသား အချင်းချင်း ဘာ အပြစ် ကြောင့် သွေးအေးအေး နဲ့ ခေါင်းဖြတ် လည်လှီး သတ် နေကြ တာ လဲ….လင့် တွေ ရှိတယ် နော်…
အကြောက် တရားနဲ့ ထိန်းချုပ် ထား တဲ့ ဘာသာ ဆို တာ ..ဆင်ခြင် ဝေဖန်မိပါရဲ့ လား..
မြန်မာ ပြည် မှာ နေရင် တိုင်း ပြည် အကျိုး ကို ဆောင်နိုင်ရတယ်…တိုင်းပြည် ရဲ့ သတ်မှတ် ထား တဲ့ အလံ ကို လေးစား ဦးညွတ် ရတယ်… အခု အခြေခံ ကျောင်းတွေ မှာ …ခင်ဗျား တို့ ပြဿနာ စရှာ နေပြီ…(၂) ကြိမ် ရှိပြီ.. ကျောင်းသား ကျောင်းစည်းကမ်း မလိုက်နာ နိုင်ရင် ဒီကျောင်း မတက်ပါနဲ့…အခု ခင်ဗျား တို့ က ဇာတ်လမ်း တွေ ဆင် နေပြီ ..သားသမီး တွေ ကို ဆုံး မတာ နိုင်ငံထက် ဘာသာ အပေါ် ..ဘာသာ တု နိုင်ငံတွေ အပေါ် အလေး ထား ဖို့ ပေါ်လွင် နေတယ်..
ဘယ်သူ တွေ က အတွင်းစိတ် မမှန် လုပ်ဆောင် နေသလဲ ဆိုတာ… လူတွေ သိကြလို့
၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု တွေ ၊ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာ တွေ ဖြစ်လာ တာ.. အဲဒါတွေ ရဲ့ ပစ်မှတ် က ခရစ်စယာန် မဟုတ်ဘူး ဟိန္ဒူ မဟုတ်ဘူး….
ဘာကြောင့် မွတ် ဆလင် ဖြစ် နေတာ လဲ … အကြောင်းရင်း ရှိရမယ်….
ဗုဒ္ဓဘာသာ က အိမ်ရှင် နိုင်ငံ ဆိုရင် ..အခြား ဘာသာ တွေ ခရစ်စယာန် ဟိန္ဒူ မွတ်ဆလင် ..တစ်တန်းတည်း ထား ပစ်မှတ် ထား ရမှာ ကို.. ဘာကြောင့် အစ္စလမ် တစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတာ လဲ….
ခရစ်စယာန် ဟိန္ဒူ သူ့နည်းသူ့ဟန် လူသား ဆန်စွာ …ဘာသာရေး စည်းရုံးတယ်…ဘယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တွေ တိုက်ခိုက်နေလဲ…. စဉ်းစား ပါ..
ကိုယ့် အချိုး မပြင် ပဲ နဲ့… ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင် ရေး အော် ဖို့ တက်မလာ နဲ့….
ခင်ဗျား တို့ လူဦးရေ ၇၀ % လောက်ဖြစ်လာရင် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင် ရေး .. ဆိုတဲ့ စကား အစား ……………….
ဘယ်စကား လာမယ် ထင် သလဲ…
မော်လ၀ီ တွေ က…..ဗလီ ပေါ်ကနေ အော်ကြပါလိမ့် မယ်… ဂျီဟတ် လို့…
ခင်ဗျား တို့ ခြေလှမ်း သဘော ပေါက် နေတယ် ဆိုတာ ယုံထား လိုက်….
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှု။ ခေါင်းထဲရောက်လာတဲ့ စကားက ဘာအစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွဆိုလား။ နိုင်ငံအတော်များများမှာ စစ်တွေဖြစ်နေတယ်။ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်သူတွေဘာလိမ့်နော်။ နိုင်ငံအတော်များများနဲ့ သူတို့ဆိုတော့ နိုင်ငံသားတွေဘက်ကပဲ လွန်တာဖြစ်မယ်။ ဟိ မတ်တော့ပါဝူး
ဘိုင် ဒယ် ဝေး…
ဒီပို့စ်က သဂျီးရဲ့ စည်းကမ်း နံပတ် ၆ နဲ့ ငြိလားဟင်င်င်..
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တယ် ဆိုတာ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးကို ပြောချင်တာလဲ ..
ဘာသာတူ ထဲမှာတောင်မှ ရှီရိုက် နဲ့ စွန်နီတောင် သူဦး သူသတ် ကိုယ်ဦး ကိုယ်သတ် ဖြစ်နေတာက အစွန်းရောက်တာလား အလယ်အလတ် လိုက်နေတာလား ..
ဘာသာတူ အချင်းချင်း ဗုံးခွဲသတ်နေတာကို ဂြိုလ်တုသတင်းမှာ ဖတ်နေရတာဟာ အစွန်းရောက်နေတာလား .. စိတ်ထဲမတွေ့ရင် ဗုံးခွဲပစ်မယ် .. ဘယ်သူသေသေ ဆိုတာက အစွန်းမှာလား အလယ်မှာလား ..
ကို mg nu ရေ ။
Comment တွေကို ပြန် မဆွေးနွေးတော့ဘူးလားဗျ ။
မွတ်တွေတော့ ( Deleted by Mod )
သဂျီး စည်းကမ်းတွေကလည်း အလကားပါဗျာ
Rule ဆိုတာကြီးနောက်ကနေ Regulation မပါရင်အလကားပဲ
ဒီမို ဒီမိုနဲ့အော်နေတဲ့ ( Deleted by Mod )
လူ့အခွင့်အရေး ( Deleted by Mod )
( Deleted by Mod ) ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေထိုင်ခြင်းပါလားဗျာ
ဘာသာ ရေး နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်း ကမ်း မငြိ ပေဘူး လား…
အခု ဒီမှာ က မှန် တယ် မှား တယ် မငြင်း လိုပါဘူး…
ဗုဒ္ဓ ဘာ သာ မှာ ကို က အတင်း မဆွဲဆောင် မစည်းရုံး ပါဘူး..
ဝေဖန် ပိုင်းခြား ယုံသင့် မှ ယုံ ခိုင်း တာ ပါ…မယုံလို့ လည်း ဘာ အပြစ် မှ
မပေး ဘူး…တစ်ခု ပဲ အကျိုး ဆက် ကတော့ မကောင်း နိုင်ဘူး ပေါ့..
မယုံ လို့ မသိ ..မသိ လို့ လုပ်… လုပ် တော့ ရ… ရ တော့ ကိုယ် ပဲ ခံ
ရမှာ ပါ…. အဲဒီ လို ဘာသာ မျိုး နဲ့ မွတ် ဆလင် လို မယုံ ရင် သတ် ခိုင်း တာ
မယှဉ် ပြ တော့ ပါဘူး…
နေ့စဉ် တီဗီံ နိုင်ငံတကာ သတင်း မှာ ..စ လိုက် ရင် မွတ်ဆလင်တိုင်းပြည် ဗုံး ခွဲ တာ က
စတာ ပါ… နှစ်ပေါင်း များ စွာ. သတိ ပြုမိကြ ပါ ရဲ့ လား…
အစ္စလမ် ရှိ တဲ့ တိုင်း ပြည် မငြိမ်း ချမ်း ဘူး…
ဒီလောက် ပဲ ပြော မယ်
တော်ကြာ မန်းဂဇက်က စာကြောင့် ပဋိပက္ခဖြစ်တယ် ဖြစ်ဦးမယ်..
ကို saline tinmg ရေ ။
ကို saline tinmg ရဲ့ Comment ထဲမှာ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ကိုရော ၊ ဘာသာတရား ကိုပါ ၊
ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲရေးထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ အများအပြား ပါနေတဲ့ အတွက် ၊
ကို saline tinmg ရဲ့ Comment တစ်ခုလုံးကို ဖျက်လိုက် ရပါတယ် ။
အဲဒီ ရိုင်းစိုင်းစွာ ဆဲရေးထားတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ မပါဝင်ဘဲ ပြန်ရေးစေချင်ပါတယ် ။
By Moderator ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေး / ဘာသာရေး မဆဲပါနှင့်ဗျာ ။
ခင်ဗျား အနေနှင့် ခင်ဗျားတို့ ဘာသာ ကောင်းကြောင်း မှန်ကြောင်း ပြောခွင့်ရှိပါတယ် ။
ခင်ဗျား တို့ မတရား ခံနေရရင်လည်း ခံနေရကြောင်း ပြောခွင့် ရှိပါတယ် ။
ယဉ်ကျေးစွာ အချက်အလက် နှင့် ပြောပေးပါ ခမျ ။
ဒါပေမယ့် ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး / ဘာသာရေး မဆဲပါနှင့်ဗျာ ။ တောင်းပန်ပါတယ် ။
San Hla Gyi ဆိုတဲ့
( Deleted By Mod ) လေးရေ ၊
မင်းလို ( Deleted By Mod ) အဆင့်ကဟေကောင်ခေါ်ရအောင်
မင်းက ( Deleted By Mod ) လား၊ မောင်ရင်တို့လုပ်နေကြတာမောင်ရင်
မင်းတို့ကုလားနေတိုင်းရှိခိုးနေရပြီး ကျန်တဲ့သူကို သူခိုးကလူဟစ်မနေနဲ့။
( Deleted By Mod ) က၀က်သားစားပြီးချီးပန်းပြီးအသေဆိုးနဲ့သေရတာ၊
မွတ်ဆလင်တယောက် ပြောသံကြားဖူးဒါ.. မိုဟာမက် သေတော့ သူခံစားရဒဲ့ ဝေဒနာဂ ငရဲပြည် ခံစားမှုထက် ဆယ်ဆပြင်းထန်သတဲ့..။ အော်ဟစ်ငြီးတွား သေတယ်နဲ့တူတယ်…။ ကျိုးကြောင်းပြတာတော့ ဘုရားသွင်းပေးထားတဲ့ အသက်သည် လွယ်လွယ်နဲ့ ပြန်ထွက်ခွင့် မရှိပေါ့ဗျာ….။ အဲဒါ ဟုတ်သလား ဆလိုင်းဖင်ထောင်….။ အမြင်ဂဒေါ့ သူ့ဖက် ကိုယ့်ဖက် ရှိမှာပေါ့နော်…။ ယုံကြည်သူတွေကတော့ သေခါနီး ဝေဒနာ ခံစားရတာနဲ့ ကောင်းကင်ဘုံ တက်တာ မဆိုင်လို့ လက်ခံကြမှာပဲ….။ မယုံကြည်သူတွေကတော့ ဆန့်ကျင်ဖက် မြင်မှာပေါ့။
ကိုကြောင်ကြီး ပြောတာ ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ အဲဒီ ငနဲက ကြားဖူးသလောက် မိန်းမတွေ အများကြီး ယူတာဆို။ ပိုဆိုးတာက သူများ သားမယားတွေကို အတင်းရော အဓမ္မရော ဟိုဒင်းပေါ့ဗျာ။မော့စ်တွေ ဖျက်မှာစိုးလို့ စကားလုံး ဒဲ့မပြောတော့ပါဘူး။ပြောရတာ ရေးရတာတောင် ရှက်လိုက်တာဗျာ။
အဲဒါကြောင့် သူသေတော့ အော်ဟစ် ငြီးတွားပြီး သေရတာ ဖြစ်မှာပဲ။ အလာက မိုဟာမက်ကို အသက် ဘယ်နေရာကနေ သွင်းပေးထားလည်း မသိဘူး။
ဆလိုင်းဖင်ပြောင် သူ့ဦးနှောက်ကလေးကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ပြန်ရေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ နောက်တနေ့ လောက်ကျရင် လာလိမ့်မယ်။ သူ့ခမျာ တော်တော် ဦးနှောက်ခြောက်နေတယ်။
ဟေ့ကောင် salin tinmg
မင်းအဆင့်က အဲဒီလောက်ပဲ တန်လို့ မင်းကို ဟေ့ကောင် ခေါ်တာပေါ့ကွ။ တိတ်တိတ်နေ မင်းကို ဝက်သားနဲ့ ရိုက်မိလိမ့်မယ်။ ( Deleted By Mod ) ဆလိုင်း ( Deleted By Mod )
ကိုယ်ယုံကြည်ရာလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ရှိတယ်။ ယုံကြည်သက်ဝင်လို့ကူးပြောင်းသွားသူတွေကိုလည်းလေးစားပေးပါ။ အပြန်အလှန်ရှိနေမှာပါပဲ။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာလေ့လာခွင့်ပြုပေးရင် တော့ နှစ်ဘက်သံသယတွေ ပြေလည်သွားနိုင်မယ်မျော်လင့်မိပါတယ်။ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး လူမျိုးရေး တရားစီရင် ရေး နဲ့ ခွဲခြားမြင်သင့်ပါတယ်။ ကိုးကွယ်ရာမတူလည်း မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရတာပဲ။ လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးနိုင်ပါတယ်။ အဓိပါယ်မဲ့ မရမ်းကားသင့်ပါဘူး။ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလိုချင်ရင်တော့ အပြန်အလှန်လေးစားရမယ်။ ဥပဒေ က ဘာသာအားလုံးပေါ်တူညီစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသင့်တယ်။ ကလေးသူငယ်နဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းလွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ရှိပေးသင့်တယ်။
အစွန်းရောက်နေတာ ဘာသာရေးမဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေကရောက်နေကြတာပါ။ စစ်သွေးကြွနေသူတွေ ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်တာလို့ပဲမြင်မိပါတယ်။